Imisebe yelanga kuplanethi enguMhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amandla amaningi afinyelela iplanethi yoMhlaba avela elangeni, ngesimo se imisebe kagesi. Ngokuya ngobude bamaza, aya ngokuya acishe abe namandla. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, imisebe ye-ultraviolet, njengoba imfushane kakhulu (ama-nanometer angama-360), ithwala amandla amaningi, ngokungafani namagagasi omsakazo amaza awo amade kakhulu.
Qhubeka ufunde ukuze wazi okwengeziwe.
Akuyona yonke imisebe efinyelela kithi evela elangeni emuncwa yiplanethi ngendlela efanayo. Empeleni, ama-26% kuphela amuncwa ngqongenkathi umkhathi uzoncela okulingana no-16%. Kubuye kuboniswe, isibonelo, ngezinto eziseplanethi (10%) noma ngamafu (24%).
Ngaphezu kwalokho, imisebe yelanga ayifinyeleli kuwo wonke amakhona ngokufanayo. Eqinisweni, imisebe igxila kakhulu enkabazwe, kuyilapho ezigxotsheni zibuthakathaka kakhulu, into ethinta ngqo isimo sezulu sendawo. Kumephu engenhla ungabona ngokuningiliziwe amandla elanga atholwa yingxenye ngayinye yeplanethi yethu. Ezindaweni eziningi, amandla aphezulu ngokuvamile ahlobene nemvula ephansi, njengasehlane laseSahara; kodwa kokunye ungabona ukuqhuma okukhulu kwempilo, njengase-Amazon.
Imisebe yelanga esebenza ngogesi isatshalaliswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene, okuyilezi:
Imisebe ye-Ultraviolet: imele u-8-9% wamandla esewonke.
Ibanga elibonakalayo: imele u-46-47% wamandla atholiwe.
Eduze kwamabanga we-infrared: imele ama-45%.
Umkhathi, njengoba sishilo, unendima ebaluleke kakhulu ekusungulweni nasekuhlanganisweni kwemisebe. Kumele futhi sikwazi lokho kuya ngokuhamba komhlaba, kanye nokuhluka kwesikhashana, amandla angahluka. Isibonelo, i-hemisphere esenyakatho phakathi nenyanga kaJuni isondela elangeni, kanti i-hemisphere eseningizimu iya kude kakhulu. Ngenxa yalokhu kuhamba singakwazi ukubala lapho kuqala izinkathi, into ngokungangabazeki ezosisiza sihlele amaholide ethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Imisebe yelanga emhlabeni